Football Khabar » मैदान छिरेका फ्यानले रोनाल्डोको ‘गर्दन’ समातेपछि ……. (हेरौं तस्बिरहरू)
मैदान छिरेका फ्यानले रोनाल्डोको ‘गर्दन’ समातेपछि ……. (हेरौं तस्बिरहरू)
हाल इटालियन युभेन्टसबाट खेलिरहेका पोर्चुगलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्ना समर्थकहरूका लागि निकै उदार खेलाडीमा पर्छन् । विशेष अवस्थाबाहेक उनी आफ्ना फ्यानहरूलाई थोरै भए पनि समय दिन्छन् । कुरा गर्छन्, अटोग्राफ दिन्छन् वा सेल्फी दिन्छन् । अझ बालबालिकासँग त रोनाल्डो झनै नजिक हुन्छन् । बालबालिकाप्रति उनको विशेष लगाव र माया हुन्छ । विभिन्न समयमा यो देखिँदै आएको छ ।
विभिन्न समयमा चलिरहँदा फ्यानहरूले खेल नै रोकिने गरी मैदान छिरेर रोनाल्डोसँग भेट गर्ने गरेका छन् । सुरक्षाकर्मीको घेरा तोडेर रोनाल्डो नजिक पुगेका त्यस्ता फ्यानले अक्सर निराश हुनु पर्दैन । त्यस्ता फ्यानका लागि उनले प्रहरीलाई रोकेर भए पनि मैदानमै समय दिन्छन् । आफ्ना आइडल खेलाडीलाई भेटेर अंकमाल गर्ने वा सेल्फी लिने उनीहरूको सपना पूरा गरिदिन्छन् । कति फ्यानलाई त रोनाल्डोले खेलपछि भेटेरै पनि जर्सी उपहार दिएका सन्दर्भ छन् ।
यस्तो स्वभाव र पहिचान भएका रोनाल्डोलाई गत राति च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेल जर्मन क्लब बायर लेभरकुसेनविरुद्ध उसकै घरमा खेलिरहँदा भने केही फरक अवस्थामा देखियो । उनी पटक–पटक गोलको अवसरबाट चुक्दा निकै निराश र विचलित देखिन्थे । उनको १ गोल रद्द हुनु र दुई सहज मौकामा चुक्दा रोनाल्डो आफैंसँग आक्रोशित देखिन्थे ।
त्यसैबेला खेल चलिरहँदा एकजना हैन, तीन–तीन जना फ्यान प्रहरीको घेरा तोडेर मैदान छिरे । जहाँ सुरुआतमा मैदान छिरेका एक फ्यानको भने सपना पूरा भयो– तनावपूर्ण अवस्थामा भए पनि रोनाल्डोले उनीसँग सेल्फी लिए । र, अंकमाल गरेर हाँसीखुसी बिदा गरे ।
त्यसपछि फेरि दोस्रा फ्यान उही शैलीमा मैदान छिरे । उनी दौडिँदै रोनाल्डोतिर अघि बढे । तर, रोनाल्डोसँग भेट हुँदा–नहुँदै उनलाई प्रहरीले समातेर बाहिर लागिहाल्यो । रोनाल्डो त्यसबेला खुसी देखिएनन् । तैपनि, उनी फ्यानलाई सेल्फी दिन चाहन्थे । तर, प्रहरीले लगिहाल्यो ।
फ्यान मैदान छिर्नेक्रम त्यत्तिमै रोकिएन । रोनाल्डोको १ गोलको मदतमा युभेन्टसले ०–२ ले जितेको खेलको समय सकिएको सिटी रेफ्रीले फुक्नासाथ अर्का फ्यान पनि उस्तै पारामा बेगिएर प्रहरीको आँखा छल्दै रोनाल्डोतर्फ हानिए । प्रहारीबाट तर्किंदै रोनाल्डो नजिक पुगेका ती फ्यानले हतारमा पछाडिबाट रोनाल्डोको गर्दनको भागमा समाते । रोनाल्डोले ती फ्यान आफूतिर आएको देखेका थिएनन् । त्यसबेला रोनाल्डो सहकर्मीसँग कुरा गरिरहेका थिए ।
त्यसैबेला अचानक पछाडिबाट आएर आफूलाई समाएका फ्यानलाई प्रहारीले घम्साघम्सी गर्दै तानेपछि रोनाल्डोको शरीर पनि सँगै तानियो, जुन कुरा रोनाल्डोलाई मन परेन । र, उनी रिसाए । उनले तत्कालै रिसाउँदै फ्यानको व्यवहारको प्रतिवाद गरे । उनले पछाडिबाट समातेकोमा फ्यानँसग असन्तुष्टि जनाए ।
ती फ्यानले गर्धनमा जोडले समातेपछि रोनाल्डोको छाला पिल्सिएको–कोतारिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । रोनाल्डोले त्यत्तिबेलै चोट लागेको महसुस गरिरहेका थिए । पछि प्रहरीले ती फ्यानलाई समातेर लगे ।
लगत्तै अर्का फ्यान झन् तीव्र गतिमा दौडिँदै आए । तर, उनी भने पाउलो डिबालालई भेट्न आएका थिए । तर, ती फ्यान डिबालासम्म पुग्न नपाई प्रहरीले समातेर लग्यो ।
सामान्यतः खेल चलिरहेका बेला मानिस मैदानमा छिर्नु खेल नियम र अनुशासनबिपरीत हो । यो खेलको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । यस्ता सम्भावित गतिविधिलाई रोक्न भनेरै खेल मैदान र रंगशालामा ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २६ मंसिर २०७६, बिहीबार १५:५६